Ukukhiqizwa nokusetshenziswa kwezinhloso ze-PVD-camera titanium aluminium Sputtering
Indlela esetshenziswa ngokwesiko yokusakaza kanye ne-powder metallurgy indlela yokukhiqiza ilitshe le-titanium aluminium alloy.
Indlela yokusakaza ye-titanium aluminium alloy target ayikwazi ukugwema i-porosity nokuncipha. Usayizi omkhulu we-titanium aluminium cast pipe kanye nama-ingots awanakuqinisekisa ngophawu lokufaka uphawu nolungangenisi manzi lapho kwenziwa ithagethi ejikelezayo, futhi njengoba udonga lweshubhu luqophekile, ukujiya kodonga kushintsha Okuncane, izimbobo ezixegayo nezincishayo inqobo nje uma kukhona imbobo exhunyiwe, ukubekwa uphawu kuzoba kubi kakhulu, okukhanyayo kuzovuza, ithubhu lelitshe lizoqala ukukhipha, noma inani elikhulu lokungcola lizobamba iqhaza ekuphenduleni futhi libangele ifilimu ukuthi iwele noma umbala ungalungile..Ezimweni ezinzima, amanzi afakwa ngqo kusuka emgodini wokuncipha kuya egumbini elinomshini, okuzongcolisa umgodi wangempela neyunithi lokuhlanza.
Ukukhiqizwa kwenqubo yokuqina kwensimbiUmgomo we-Titanium aluminiumAkunankinga ye-porosity ne-shrinkage, kepha kusukela ekubukeni okuncane kakhulu kwe-powder metallurgy, kubuye kube yimpahla enezimbobo, ngakho-ke uma ufuna ukwenzaI-Titanium aluminium ejikelezayo yethagethi, Izidingo zokuhlanganiswa kwezinto ezibonakalayo ziqinile kakhulu, ukuminyana kufanele kube kukhulu kune 98%, kodwa ukuhlangabezana nezidingo zobuningi akusho ukuthi kungasetshenziswa.Uma okuqukethwe komoya-mpilo we-titanium aluminium ingot kuphezulu futhi ukwakheka kwezinto ezincane kungenangqondo, ukucindezeleka kwangaphakathi kwe-titanium aluminium ingot kukhulu, futhi kulula ukuwa, futhi ayinakusetshenziswa njengenhloso yethubhu ejikelezayo. Ngakho-ke, kunezidingo eziningi zokukhiqizwa kwe-powder nobukhulu bezinhlayiyana..Ngisho noma ngabe le mibandela ihlangatsheziwe, i-powder metallurgy titanium aluminium ring idinga ukuboshelwa kushubhu yensimbi engagqwali noma ithubhu ye-titanium. Ngenxa yenani elikhulu lokunwebeka lokushisa kwe-titanium aluminium, ukunwetshwa kwethagethi yendawo kungafika kuziro ngesikhathi sokuchithwa kwemibhobho..5 ～ 1m, ngakho-ke indlela yendabuko yokubopha ama-ingots ayikwazi ukuxazulula le nkinga ngempumelelo. Ukwehlukaniswa kwe-titanium ne-aluminium ingots ebophayo kwenzeka, namandla ashisayo endawo ebhekiswe kuyo ayinakwenziwa futhi aqhume..Nokho, isibopho esifanayo esiqinile asithembekile, futhi ikhwalithi yelitshe le-plasma elifuthwe nge-titanium aluminium target alilungile..
Ukumboza okuhlobisayo kuphakame igolide ewashini, ubucwebe, nezimboni zamehlo. Muva nje, izidingo eziningi aziqukethe ikhabhoni futhi ziqhubeka nokwenza umbala ophansi we-rose usondele ebusweni ebusweni igolide..Ngombono wethu, I-TiCN ayisakwazi ukuhlangabezana nezidingo. I-TiAlN ikhambi eliphelele kunazo zonke. Ubucwebe bewashi obusezingeni eliphansi abunazo izidingo zokuqina kwefilimu nokucwebezela. Iningi labo lisebenzisa izinhloso ze-arc titanium aluminium ukufaka i-TiAlN. Amawashi womkhiqizo asezingeni eliphakeme adinga ukushuba okungaphezu kwe-1um kanye ne-gloss. Ayikwazi ukuwa.I-arc ithinteka ngamaconsi futhi ayinayo inzuzo kwifilimu ebushelelezi futhi ejiyile.FromO’KellyKungabonakala kusuka empendulweni ye-oda lokuphakelwa kwamanje ukuthi indlela engcono ukufaka i-TiAIN ngenhloso yethubhu ejikelezayo, hhayi kuphela umbala osondelene negolide rose, kepha isicwebezelisi asizukuthinteka ngemuva kokuthi ukushuba kukhuphukile..
Okwedlule: Isakhiwo esiyinhloko sethagethi yendiza
Olandelayo: Yini ukujikisa kokujikisa kwe-Sputtering？